Soo dejisan AppLock 2.22.2 – Vessoft
Nidaamka hawlgalka: Android
Qeybta: Qalabka shaashada
Bogga rasmiga ah: AppLock
AppLock – software ah oo xadidaya helaan in faylasha iyo codsiyada adigoo isticmaalaya password a. AppLock u saamaxaaya in ay qarka u saaran hannaanka graphic ama password in aad xirtid ah fayl, gallery ee files warbaahinta, xiriirada, browser, dhejisaa menu of qalab ah, helitaanka internet-ka, iwm AppLock waa inay awoodaan inay iska baddasho goobta lagu furayaasha rada tiro ee si looga hortago peeping dadka kale galay hannaanka graphic ama isgarad-ery. software The kuu ogolaanayaa inaad dhigay su’aasha ammaanka iyo jawaabi inuu ka soo kabsado ay helaan in ay dhacdo xaalado lama filaan ah. AppLock sidoo kale waxay bixisaa tiro balaadhan oo ah mawduucyada inaan masaal u garaafyada.
Xanibeen Rasuulada iyo macaamiisha email
ilaalinta Password ee files warbaahinta
Cidhiidhyo helitaanka internet ah
Qeexaa password ka mid ah menu goobaha
Connection of sifooyinka caymiska
Soo dejisan AppLock
Faallo ku saabsan AppLock
AppLock Xirfadaha la xiriira
AVG AntiVirus – softiweer ah awood badan oo difaac u leh aaladda ka ilaaliya fayraska noocyada kala duwan. Softiweerku wuxuu ka koobanyahay howlo badan oo kala duwan iyo cutubyo si kor loogu qaado howlgalka aaladda.
Avast Mobile Security – oo ah ka hortag dhammeystiran oo ka ilaaliya nidaamka ka soo horjeedka fayraska iyo fayraska. Sidoo kale, waxay taageertaa qaabab kala duwan oo hawlgal ah si loo garto dhibaatooyinka nidaamka loona bixiyo kahortag halista shabakadda.
Blokker – ilaalinta wax ku oolka ah ee xogta aaladda ka dhanka ah adeegsiga dadka aan ruqsada loo siinin. Software-ka ayaa xannibaya bilowga codsiyada iyo adeegyada la doortay.
Amniga Aaladda Avira ee loo yaqaan ’Antra Security Antivirus’ – fayras ka difaacaya nidaamka aaladda ka dhanka ah fayrasyada iyo hanjabaadaha kale. Sidoo kale haddii loo baahdo waxay taageertaa qufulka qalabka fog fog iyo wicitaanada soo galaya ama SMS.
CM Security – waa fayras dhammeystiran oo ka ilaaliya aaladda ka hortagga fayraska noocyada kala duwan. Software wuxuu adeegsadaa algorithms-ka casriga si loo ogaado loona saaro khataraha.
360 Security – softiweer si looga ilaaliyo aaladda ka hortaga fayraska iyo mowjadaha xaasidnimo, nadaafadda nidaamka, maareeynta barnaamijyada oo loo badbaadiyo tamarta batteriga.
IDM – maamule isku-dubaridan si ay uga soo dejiso feylasha noocyo kala duwan iyo qulqulka qulqulka internetka, kaas oo la yimid aalad biraawsar ku dhisan iyo waxqabadka horumarsan.
Dolphin Browser – biraawsar xawaare ku socda daalacashada shabakadda. Softiweerku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo faa iido leh oo loogu talo galay joogitaanka qumman ee internetka.
Adobe Acrobat Reader – oo ah sawir yaqaan caan ah oo PDF ah. Codsiga wuxuu furan karaa dukumiintiyada PDF ee ilo kala duwan oo ku dari kara faallooyinka iyaga.